သင့်ကားကို သက်တမ်းပိုမို ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် လိုက်နာရမည့် အချက် (7) ချက် - XYZ NEWS
သင့်ကားကို သက်တမ်းပိုမို ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် လိုက်နာရမည့် အချက် (7) ချက်
February 1, 2020 By Editor KNOWLEDGE, UNUSUAL
​​မော်​​တော်​ကားကိုမောင်းနှင်သူများဟာ မောင်းနှင်နေသည့်ကားကို သင့်တော်စွာ ဂရုစိုက်ရမည်ကို မစဉ်းစားမိကြပါဘူးသို့သော်လည်း အောက်ဖော်ပြပါ အသုံးတည့်လွယ်ကူမည့် နည်းလမ်းများကို လိုက်နာပါက ကားအတွက် စျေးကြီးသောဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများကို လုပ်စရာမလိုပဲ ကားကို အထိအခိုက်မရှိ အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၇. တာယာလေဖိအားကို အရမ်း နည်းလွန်း များလွန်းထားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ
ရံဖန်ရံခါ ကားတာယာလေဖိအားကို အရမ်းနည်းလွန်း များလွန်းစွာထားတတ်ကြပါတယ် ၊ ထိုသို့သောအခြေအနေက​မော်တော်ယာဉ်၏လှောင်စာဆီကို ပိုမိုအသုံးပြုစေပြီး မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်မှုကိုပါ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်​။ ဥပမာအားဖြင့် ကားဘီးချော်ခြင်းနှင့် ယာဉ်မတော်တဆမှုပါ ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်​။ထိုသို့သောအခြေအနေကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန် သင့်ကားတာယာကို အချိန်နဲ့လိုက်ပြီး ပြောငး်လဲဖို ့လိုအပ်ပါတယ်​။ ဦးစွာပထမအချက်မှာ သင့်ကားတာယာကို ရာသီအလိုက်လဲပေးဖို ့မမေ့ပါနဲ ့။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် ရှေ ့ကားတာယာနှင့် နောက်ကားတာယာကို တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်လဲပေးပါ။
အရှိန်မြှင့်မောင်းနှင်ခြင်းနှင့် ရုတ်တရက် ဘရိတ်အုပ်ခြင်းသည် ကားကို ဆိုးဝါးစွာ ထိခိုက်စေပါတယ်​။ မော်တော်ယာဉ်၏ အမျိုးမျိုးသော စနစ်တွင် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်​။ဥပမာအားဖြင့် ဂီယာအုံနှင့် အင်ဂျင်ကို ဆိုးဝါးစွာ ထိခိုက်စေသည့်အပြင် ဘရိတ်စနစ်တွင်ပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်းများသည်လည်း မြန်မြန်ဆန်ဆန် ယိုယွငး်သွားနိုင်ပါတယ်။​ဒါ့အပြင် ဘရိတ်၏စွမး်ဆောင်ရည်လ​ည်းကျဆင်းသွားသည့်အတွက် ယာဉ်မတော်တဆမှုကိုပါဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်​။
ကားပါကင်ထိုးခြင်းက လွယ်ကူသောကိစ္စတော့မဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့် မောင်းတတ်ခါစ ယာဉ်မောင်းများအတွက် ခက်ခဲသောအရာဖြစ်ပါတယ်​။ ပုံမှန်အားဖြင့် ယာဉ်မောင်းသူများက ကားပါကင်ထိုးသည့်အခါ ကားကို လုံးဝမရပ်ပဲ ဂီယာကို Drive မှ Reverse သို ့ပြောင်းတတ်ပါတယ်။​ထိုသို့သောအပြုအမူများကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။​ထိုသို ့လုပ်ဆောင်ပါက အော်တိုဂီယာပြောင်းမှုကို ထိခိုက်စေပြီး စျေးကြီးသော ပြင်ဆင်မှုကိုပါ လုပ်ဆောင်ရနိုင်ပါတယ်​​။ ထို ့ကြောင့် ကားပါကင်ထိုးသည့်အခါ ကားကို လုံးဝရပ်လိုက်ပြီးမှသာ ဂီယာပြောင်းသင့်ပါတယ်​။
သင့်ကားဒိုင်ခွက်ပေါ်ကအချက်ပေးသင်္ကေတများကသင့်ကား တစ်ခုခု မှားယွင်းနေကြောင်းကို သတိပေးနေပါတယ်​။ဥပမာအားဖြင့် ကားအင်ဂျင်၏ အပူချိန် မြင့်လွန်းနေခြင်း၊ လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စနစ်မှားယွင်းနေခြင်း၊ ဘရိတ်ဆီပမာဏနည်းလွန်းနေခြင်းစသည့် အခြေအနေများကို ဖော်ပြနေပါတယ်​။ ထိုသို ့အချက်ပြမှုကို တွေ ့ရှိပါက လျင်မြန်စွာ ကားပြင်ဆိုင်ကို သွားပါ။ထိုသို ့လုပ်ဆောင်ပါကဈေးကြီးသော ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ရန်မလိုသည့်အပြင် မတော်တဆမှုကိုပါ ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်​။
၃. မော်တော်ယာဉ်ကို စစ်ဆေးဖို ့နှင့် ပြင်ဆင်ပေးဖို ့မမေ့ပါနှင့်
မော်တော်ယာဉ်ပျက်ဆီးခြင်းတွင်တွေ့ရများသော အကြောင်းပြချက်မှာ ယာဉ်မောင်းသူများသည်မော်တော်ယာဉ်ကိုထိန်းသိမ်းမှုပြုလုပ်ဖို့လျစ်လျူရှု ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။​မော်တော်ယာဉ်ထိန်းသိမ်းမှုပြုလုပ်ခြင်းကစရိတ်စက ကြီးမားသော ကားပြင်ဆင်မှုကို ရှောင်ရှားနိင်သော အရေးပါသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်​။ဥပမာအားဖြင့် မော်တော်ယာဉ်ကို မိုင်ပေါင်း ၆၂၀ မောင်းနှင်ပြီးပါက ဆီပမာဏကို ပြန်လည် စစ်ဆေးသင့်ပြီး မိုင်ပေါင်း ၂၅၀ မောငး်နှင်ပြီးပါက ကားအင်ဂျင်လေပေါက်ကို လဲပေးဖို ့လိုအပ်ပါတယ်​။ နှစ်စဉ် စစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်သင့်အပြင် နေ့တိုင်းစစ်ဆေးမှု(အင်ဂျင်ဆီပမာဏ၊ တာယာလေဖိအား၊လေကာမှန် စသည်ဖြင့်) ကိုလုပ်ဆောင်ဖို ့မမေ့ပါနှင့်။ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စစ်ဆေးမှုများသည် ရာသီဥတုနှင့်မောင်းနှင်သည့် ခရီးမိုင်ပေါ်မူတည်သည်ကို အမှတ်ရပါ။
ဝန်ပိုတင်မောင်းနှင်ခြင်းကကား၏ အောက်ပိုငး်စနစ်၊ စတီယာရင်စနစ်၊ဂီယာစနစ်၊တာယာနှင့် အင်ဂျင်စသည့် စနစ်အားလုံးလိုလိုကို ထိခိုက်စေပါတယ်။​ဒါ့အပြင် ဒီလိုဝန်ပိုတင်မောင်းနှင်ခြင်းကသင်​့ကားရဲ့ လောင်စာဆီ ကိုပိုမိုသုံးစွဲမှုဖြစ်စေသည့်အပြင် လမ်းမပေါ်တွင် ကား၏မောင်းနှင်နိုင်စွမ်းကိုပါ ဆိုးကျိုးဖြစ်စေပါတယ်​။ ဒီလိုမဖြစ်စေရန် ယာဉ်မောင်းသူသည် မောင်းနှင်မည့်ယာဉ်၏ အများဆုံးတင်နိုင်သောဝန်ပမာဏအတိုင်းသာတင်ဆောင်ပြီး မောငး်နှင်သင့်ပါတယ်။​ထို ့အပြင် ကားတွင် အသုံးမလိုသော ပစ္စည်းများ လျှော့ချပြီး အမှန်အသုံးဝင်သောပစ္စည်းကိုသာတင်သင့်ပါတယ်​။
ထိုသို ့သော အမှားသည် လက်ထိုးဂီယာစနစ်ရှိသော ကားကိုမောင်းနှင်သူများတွင် အတွေ ့များသော အမှားဖြစ်ပါတယ်​။ မီးပွိုင့် အကြာကြီးမိနေချိန်တွင်ကလပ်ချ်ကိုအကြာကြီးမနင်းထားပါနှင့်။ကားရပ်နားသင့်သောအချိန်တွင် အနားမပေးပဲ ကလပ်ချ်နင်းကာ ကားကို အလုပ်ပိုလုပ်စေသည့်အတွက်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်ကိုလျင်မြန်စွာချို ့ယွင်းစေပါတယ်​​။ တိုတောင်းသောရပ်တန် ့ချိန်တွင် ဂီယာကို ပုံမှန်(Neutral) စနစ်သို ့ပြောင်းပြီး စတင်မောင်းနှင်တော့မည်ဆိုမှ ကလပ်ချ်ကိုနင်းပါ။
ဟင်းပွဲကို ပိုမြိန်စေသည့် ကြက်သွန်ဖြူ၏အရသာနှင့် အနံ့ကြောင့် လူတော်တော်များများကြက်သွန်ဖြူကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်​။ သို့သော် ကြက်သွန်ဖြူ၏ကားပြင်ဆင်မှုအတွက်အံ့သြဖွယ်လုပ်ဆောင်မှုကိုသင်သိပါသလား။ကြက်သွန်ဖြူတစ်မွှာယူပြီး ကြက်သွန်ဖြူကိုဒေါင်လိုက်လှီးချလိုက်ပါ။ ထို့နောက် လှီးထားသောကြက်သွန်ဖြူဖြင့် လေကာမှန်အက်ရာကိုပွတ်ပြီး ထွက်လာသောအရည်ကို စက္ကူ သို ့မဟုတ် လက်သုတ်ပုဝါဖြင့် သုတ်လိုက်ပါ။ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျကျ ပြင်ဆင်ခြင်းမဟုတ်သော်ငြားလည်း ထိုအက်ရာကို ပြန်မပြင်မှီအချိန်အထိ အက်ရာပိုမဆိုးသွားနိုင်အောင်ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်​။
စာဖတ်သူတို ့လည်းကားကိုတစ်သက်လုံးကြာရှည်စွာ သုံးနိုင်သောနည်းလမး်ရှိပါက ကောမန် ့တွင်မျှဝေပေးပါဦး…